Imibuzo evame ukubuzwa - Shanghai Rainbow Industrial Co., Ltd.
Ngingathola isampula ngaphambi kokuthenga?
Yebo, isampula eli-1 limahhala, vele umboze izindleko eziyisisekelo zokuthumela
Ngingathola isampula nelogo yami iqoshwe?
Yebo, sicela usithumelele ama-logo wakho we-Ai noma ama-cdr bese ukhokha izindleko eziyisisekelo zokukhiqiza, imvamisa 1 uhlobo lwe-USD50
Ngingawudizayina kanjani umsebenzi wami wobuciko?
Singahlinzeka ngosayizi wokuphrinta oqoshiwe kuwe, ubuciko bakho kufanele bube ngaphakathi kwalolo sayizi. Noma thumela ukwakhiwa kwamanje kithi, umklami wethu angakhuphula noma anciphise usayizi.
Ingabe unikezela ngezinsizakalo zokuma okukodwa? Njengelebula, ibhokisi noma isikhwama nokunye okunye?
Yebo, siyakwazi ukunikeza isipiliyoni sokuthenga okukodwa, umane uthumele imikhiqizo yezithombe noma imininingwane yemininingwane kumuntu wethu wokuthengisa.
Isikhathi sini somholi?
Amasheya angakapheli iviki elingu-1, Ukukhiqizwa: imvamisa izinsuku ezingama-35 kuya kwezingama-45 ngemuva kokuthola idiphozi engama-40%, uma ukuphrinta kukasilika, ukushisa okushisayo, isikhathi sizokwengeza izinsuku eziyi-10 kuya kwezingu-15.
Akukho ukuphathwa kwendawo noma ukuphrinta kwe-logo, i-MOQ efanayo newebhusayithi; I-logo yangokwezifiso, i-MOQ: ama-5000pcs, imikhiqizo yamasheya incike esimweni sangempela.
Yikuphi ukunikezwa okuphezulu okutholakalayo?
Umfanekiso oqoshiwe, Ukuphrinta, Hot-nginyathela, ilebula, UV enamathela nokunye.
Ingabe uhlala unamasheya?
Amasheya atholakalela isikhathi esifushane kuphela, ngaphambi kokuthenga sicela uxhumane nabathengisi ababheka amasheya.
Ngingathola ikhambi uma ngithola imikhiqizo enekhwalithi ephukile noma embi?
Noma yiziphi izinkinga eziphukile noma zekhwalithi, sicela uxhumane nathi kungakapheli izinsuku eziyi-15 ngemuva kokuthola izimpahla. Thatha izithombe noma uthumele ividiyo nge-imeyili yomuntu othengisayo.
Sithembisa yonke imikhiqizo ngentengo efanele, ikhwalithi yinhle. Uma ikhasimende libheka intengo eshibhile kuphela, sizokukhumbuza ngomusa ukuthi ikhwalithi ayiyinhle, uma ikhasimende lisathenga, ngeke sizibophezele